Nwamba nwere ndụ 7 - Ihe kpatara nkwupụta a | Bezzia
Gịnị kpatara ha ji sị na nwamba nwere ndụ 7?
Gịnị kpatara na nwamba na-enwekarị ndụ 7? Ikekwe ị bụ nkọwa a mana ị ga-eche ihe kpatara okwu a. Ọfọn, taa bụ oge anyị ga-enwe ike idozi obi abụọ ndị ahụ na-echere anyị. Ebe ọ bụ na ha na-achọsi ike mgbe niile iburu n'uche ma ọ bụrụ na ị na-ebi otu nwamba ma ọ bụ karịa, ị ga-enwe mmasị karị ịmara azịza ya.
A na-ejikọta nwamba mgbe niile na ihe dị mma n'akụkọ ihe mere eme. Ikekwe ọ bụ ya mere e ji enwe ọtụtụ ọchịchọ ịmata ihe gburugburu ha. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na anyị ga-ekwukwa banyere ndụ asaa ahụ anyị na-ekwukarị banyere ha. Chọpụta!
1 ike anụ ahụ gị
2 Akụkọ ifo na Middle Ages
3 nọmba anwansi
4 nlọghachi ya
ike anụ ahụ gị
A na-ekwu na nwamba nwere ndụ 7 n'ihi ike anụ ahụ ha. Ya bụ, nke a agaghị eme ka ha nwee onwe ha pụọ ​​​​n'ọrịa ọ bụla, ma n'ihi ikike anụ ahụ ha, ha nwere ike daa n'ebe dị elu na-enweghị mmerụ ahụ. Ihe ahụ anyị na-anụ mgbe niile gbasara nwamba na-agbada n'ụkwụ ha yiri ihe anyị kwuru. Ọ bụghị na ha na-ada n'ụkwụ ha n'ezie, ma mgbe ha daa, ha anaghị emerụ ahụ ngwa ngwa dị ka ụdị ndị ọzọ. Na mgbakwunye na inwe obere arọ, ekwesịrị ịkọ ya ha nwere ọkpụkpụ azụ kachasị na-agbanwe agbanwe na nnukwu nguzozi. Mgbe ha daa, ha ga-eji azụ ha na-eme ụdị arch, nke na-eme ka ọ na-arụ ọrụ dị ka parachute. Ugbu a, anyị ghọtara ntakịrị ihe banyere ịdakwasị ụkwụ gị na-enweghị mmerụ ahụ.
Akụkọ ifo na Middle Ages
Ọ bụ ezie na nwamba na-etinyekarị aka n'ụdị akụkọ ifo dị iche iche. Ma n'oge emepechabeghị anya, ha na-abụkarị akụkụ nke afa. Ọ bụ ezie na ha achọghị, ha na-enwekarị ihe jikọrọ ha na ịbịaru ha nso, yana ndị dibịa afa ma ọ bụ ndị amoosu gbara ha gburugburu. Ikekwe nanị n'ihi ihe ha na-achọ ịmata ihe pụtara. Ma, n’agbanyeghị na o nwere ike, o yiri ka ọ̀ bụ n’agbanyeghị mkpagbu a na-akpagbu ha, ha na-anọkarị. Ya mere, ebe ahụ ka ewepụtara echiche na ha nwere ike ịbụ anwansi. Ebe ọ bụ na mgbe ejidere ndị amoosu, ụmụ anụmanụ na-ata ahụhụ otu ihe ahụ. Ma ebe ọ bụ na ọ bụghị onye ọ bụla chere otu ihe ahụ, e nwere ọtụtụ ndị nabatara ha.
Na mgbakwunye na ihe anyị kwuru n'elu, a gbakwunyere nọmba 7 na ya karịa ihe ọ bụla n'ihi na a na-ewere ha dị ka anụmanụ karịa ihe dị nsọ, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla dị ka njikọ ya na nọmba nke bụkwa anwansi. Ee, ọ bụrụ na ị maghị na ọ bụ nọmba 7 na-adọta chi ọma. Na mgbakwunye na-ejikọta ya na anwansi mgbe niile. Ya mere, njikọ nke a na ụmụ anụmanụ. Mana kpachara anya, n'ihi na na mba ụfọdụ anaghị ewere ha dị ndụ 7. Na mba Anglo-Saxon a na-ekwu na o nwere 9, n'ihi na e ji akụkọ ihe mere eme nke Chineke Ra akara ngosi ya. onye mere njem gaa n’okpuru ụwa n’ụdị nwamba wee were ndụ n’aka chi niile. Mgbe maka ndị Turks, nwamba nwere otu ndụ dị obere. Yabụ, nke a ga-adabere na nkwenye nke ebe ọ bụla.
Anyị ahụlarị na nwamba na-ejikọta ya na ụwa anwansi na akụkọ ifo na akụkọ kachasị mma. N'ihi nke a, na omenala ndị Ijipt, a na-echekwa ịlọ ụwa nke anụmanụ. Ka ọ were nwamba ga-alaghachi n'ụdị mmadụ ma ha rute n'ịlọ ụwa nke asaa. Ya mere, n'ịmara ihe a nile, ọ dị mfe ịghọta ihe kpatara nwamba nwere ndụ 7. N'ezie, ihe a nile a hapụrụ na ha nwere n'ezie nanị otu ndụ. Otu nke anyị ga-elekọtarịrị ma nye ha ihe niile kacha mma ka ha nwee ike ịnụ ụtọ ya nke ọma. Yabụ, cheta na usoro nchekwa ga-adịrịrị n'ụlọ gị. Ka anyị ghara ịnwa akara aka!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Mascotas » Gịnị kpatara ha ji sị na nwamba nwere ndụ 7?
Pez, mkpokọta akpụkpọ ụkwụ SS22 ọhụrụ nke Naguisa
Nzọụkwụ iji zoo isi awọ na nku anya